Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa khamiistii waxay ka warbixineysay 19 dhimasho dheeraad ah oo C | KWIT
Laga bilaabo 1-da duhurnimo maanta, 7,687 qof oo ku nool Gobolka Woodbury ayaa helay labada tallaal ee tallaalka laba-tallaal ah, halka 568 kale ay heleen tallaal hal-qaadasho ah, sida lagu sheegay tirakoobka gobolka. Taasi waa qiyaastii 8 boqolkiiba dadka gobolka.
Saraakiisha Waaxda Caafimaadka ee Gobolka ayaa sheegaya in noocyada kala duwan ee coronavirus ee markii ugu horeysay laga helay Boqortooyada Midowday haatan laga xaqiijiyay Koonfurta Dakota. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in laba xaaladood la soo sheegay oo labada bukaanba lagu soo kabsaday guriga. Xoghayaha Caafimaadka ee Dawladdu wuxuu leeyahay waaxdeeda ayaa si dhow ula socotey horumarka noocyada cusub.
Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa maanta ka warbixiyay 203 kiis oo virus cusub ah, taas oo kordhinaysa tirada guud ee tijaabooyinka wanaagsan ilaa 114,163 tan iyo bilowgii cudurka faafa.
Dadka madowga ah ee ku nool Iowa ayaa ku dhacda kuna dhinta kansarka heerar ka sareeya kan deriskooda, sida lagu sheegay warbixin sanadle ah oo ay soo saareen cilmi baarayaasha jaamacada Iowa. Heerka dhimashada kansarka ku dhaca dadka Madow ayaa in ka badan 25% ka badan kan dadka cadaanka ah, sida lagu sheegay warbixinta.
Dr. Mary Charlton, oo ah kaaliyaha borofisarka cilmiga cudurada faafa ee kuliyada caafimaadka bulshada ee UI kana mid ah qorayaasha wax ka qora daraasadan, ayaa sheegtay in kala duwanaanshaha ay ka dhalatay cunsuriyada qaabdhismeedka
Warka waxaa kuu keenaya Seaboard Triumph Foods oo ku taal Sioux City Iowa, iyadoo si sharaf leh u taageeraysa bulshada Siouxland ilaa iyo 2017. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Seaboard Triumph Foods fadlan booqo Sioux City Pork Dot